एक फ्लडलाइट एक व्यापक beamed, उच्च तीव्रता कृत्रिम प्रकाश हो। यो नेतृत्व बाढी प्रकाश रचनात्मक, सानो र सुन्दर आकार कि अपनाईएको कास्टिंग एल्युमिनियम सामाग्री को आनन्द लिन्छ। खोल को रंग सामान्यतया पालेकालो कालो हो, र रंग आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
Luminaires पानी विरुद्ध सुरक्षित र IP65 उच्च सुरक्षा ग्रेड प्राप्त हुनेछ। यो वर्दी प्रकाश प्रभाव, टाढा को दूरी बाढी प्रकाश प्रभाव र मुख्य रूप मा बाहिरी र भित्री उपयोग को लागी आदर्श मा घर, बगैचा, ग्यारेज, लन, अगाडि र पछाडि यार्ड र बिल्डिंग विज्ञापन र विशाल वास्तुकला को प्रकाश मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
विशिष्टता अप्टिकल मापदण्डहरु:
1. रंग तापमान: मानक रंग तापमान दायरा 3000-6500K, न्यानो प्रकाश र चिसो प्रकाश को आवश्यकताहरु लाई पूरा ठीक छ।
2. बीन एन्जिल: १२० ° बीम कोण, छाया मुक्त र विरोधी चमक, तपाइँको ठूलो क्षेत्र वातावरण को लागी कुशल प्रकाश प्रदान। एक समायोज्य धातु कोष्ठक प्रकाश लाई अधिक स्थिर बनाउँछ।
3. स्रोत जीवन: अधिक 30000H
1. इनपुट भोल्टेज: 220-240V, 50HZ
2. रेटेड शक्ति: 10w/20w/30w/50w/100w (उच्च शक्ति कुनै पनी समयमा पूछताछ हुन सक्छ)
3. चमकदार प्रवाह: 85LM/डब्ल्यू
1. आधार सामग्री: मरने कास्टिंग एल्युमिनियम र टेम्पर्ड गिलास
2. सबै वाट क्षमता को उत्पादन आकार: 10w: 87.5*62*32mm/ 20w: 100*70*34.5mm/ 30w: 136*110.5*34.5mm/ 50w: 180*142.5*34.5mm/ 100w: 210*163.5*34.5 mm
१. लामो-जीवनकाल र स्थापना गर्न सजिलो: ग्रूभ रेडिएटर हावा सम्पर्क क्षेत्र बढाउन, गर्मी लंपटता को गति, यसैले रोशनी को आयु लम्बाउनु हो। ठोस र समायोज्य इस्पात स्टेंट संग, बाहिरी काम प्रकाश पर्खाल, छत वा जमीन मा माउन्ट गर्न सकिन्छ।
2. शक्ति र ऊर्जा को बचत: एलईडी बाढी रोशनी 8500lm चमक सम्म उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ; र त्यसपछि यो 75% भन्दा बढी बिजुली बचत हुनेछ, यो धेरै कम खपत पारंपरिक हलोजन बाहिरी बत्ती संग तुलना, यो अब उच्च बिजुली लागत को बारे मा चिन्ता छ।
प्रत्येक ग्राहकलाई २ बर्षे वारेन्टी प्रदान गर्नुहोस्। हामी हाम्रा उत्पादनहरु को गुणवत्ता मा विश्वास र हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड ग्यारेन्टी। हामी प्रत्येक ग्राहक को विचारहरु को मूल्य र उच्च गुणस्तरीय बिक्री पछि सेवा संग हरेक ग्राहक प्रदान गर्दछौं।
अघिल्लो: माइक्रोवेव सेन्सरको साथ एक्स सीरीज फ्लडलाइट
अर्को: S श्रृंखला बाढी प्रकाश PIR सेन्सर संग
ब्लुटुथ बाढी प्रकाश
बाहिरी बाढी बत्तीहरु
सौर बाढी बत्तीहरु
Tuya बाढी प्रकाश
वाइफाइ बाढी प्रकाश